BUDDHIST TERMS' Dictionary: STREAM-ENTERER - သောတာပန္န
STREAM-ENTERER - သောတာပန္န
သောတာပန္န (Sotᾱpanna)- သောတာပန်၊ အရိယာမဂ်တည်းဟူသော ရေအလျဉ်သို့ ရောက်သူ။
သမထ၀ိပဿနာ ရှုပွားရာတွင် သောတာပတ္တိမဂ်သို့ ဆိုက်ရောက်ဆဲပုဂ္ဂိုလ်ကို သောတာပတ္တိမဂ်ပဂ္ဂိုလ်ဟု ခေါ်၏။ မဂ်စိတ်တစ်ချက် လွန်မြောက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သောတာပတ္တိဖိုလ် ဖြစ်၏။ ထိုအခါ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို သောတာပန် ဟု ခေါ်ဆိုရ၏။ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အောက်ပါအင်္ဂါငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသည်။
(၁) ဘုရားရတနာ၌ မတုန်မလှုပ် သက်ဝင်ကြည်ညိုသည်။
(၂) ရတနာသုံးပါး၌ မတုန်မလှုပ် ကြည်ညိုသည်။
(၃) ငါးပါးသီလကိုစောင့်ထိန်းရာဝယ် အသက်ကို စွန့်၍ စောင့်ထိန်းသည်။
(၄) သက္ကာယဒိဋ္ဌိ, ၀ိစိကိစ္ဆာ, သီလဗ္ဗတပရာမာသ, ဣဿာ, မစ္ဆရိယ သံယောဇဉ်တရားကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်သတ်သည်။
(၅) အပါယ်လားကြောင်း အကုသလကမ္မပထ (၁၀)ပါးတွင် သူ့အသက်သတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာခိုးခြင်း၊ သူ့သားမယားအိမ်ရာ ပြစ်မှားခြင်း၊ လိမ်ညာပြောခြင်း၊ အယူမှားခြင်းကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်သည်။
One who enters the stream of the Ariya Path
In meditating for tranquility and Insight, the yogi who has just gained stream-entry knowledge is called at the very instant,asotapattimagga puggala. At the immediately following intant after that enlightening thought-moment there follows the Fruition Knowledge. Then he is calledasotapanna,astream-enterer is endowed with the following five attributes :-
(1) He has an unshakeable conviction in the Buddha;
(2) He has an unshakeable conviction in the Three Gems;
(3) He observes the five precepts even at the risk of his life;
(4) He becomes absolutely free from the fetters (samyojana) of the illusion of Self (the mistaken idea about the existence ofapersonal entity), doubts, wrong belief in rites and rituals outside the Ariya Path, jealousy and stinginess;
(5) He totally extinguishes five out of the ten modes of evil conduct that lead to the four miserable states of apᾱya, namely, killing, stealing, sexual misconduct (i.e, adultery), lying and wrong views.